Diary an'ny naturalista - Ikkaro
firosoana >> toetra
Ity fizarana ity, izay tiako holazaina, dia natokana ho an'ny naturalisme, dia karazana bilaogy, diary miaraka amin'izay rehetra ianarako momba ny lohahevitra samihafa sy ny angona rehetra angoniko. Tsy bilaogy io, na tranokala mahazatra, ny lahatsoratra farany dia tsy haseho. Izy io dia mitovy kokoa amin'ny wiki iray izay anoratako tsy tapaka sy fanavaozam-baovao, mba hananako azy hatrany
Anisan'ireo faritra samihafa hanombohako mametraka fampahalalana manasongadina ahy:
Zava-maniry sy fampahalalana mifandraika amin'izany
Takelaka biby, vorona, bibikely, amphibia, biby mandady, sns
Hanomboka amin'ny Geology, meteorology, ornithology, sns isika.
Boky famoahana an'i Julián Simón López-Villalta de la Editorial Tundra. Fahagagana kely izay nahatonga ahy hanova ny fahitako amin'ny teboka maro.
Ao amin'ilay boky no dinihiny ny ekolojia ny ala mediterania. Mandalo ny tantaran'ny Mediteraneana, ny toeram-ponenany sy ny zava-boahary izay itantarany amintsika ny momba ny hazo, kirihitra, zavamaniry, zana-trondro, granivora, zavamaniry, mpandoto, parasyida, bibikely, mpihaza, mpandroba.
Fizarana natokana ho an'ny fahavelomana (haintany, hain-trano, fanala sns) ary iray hafa amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny karazany (biby mpihaza sy remby, katsentsitra, fifaninanana, fiaraha-mientana sy simbiose ary fisakafoanana ary mpanofa trano)
Araka ny hitanao dia fijerena tanteraka ny karazan-javamaniry sy biby ary ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo sy ny toerana onenan'izy ireo. Nohazavaina sy natambatra tanteraka izy rehetra, manome topimaso ny fomba fiasan'ny tontolo iainana, ny antony mampiavaka azy manokana ary ny antony maha-biodiversité betsaka azy.
Amin'ny alàlan'ny Sea Pottery dia takatsika ireo sombin-keramika na taila rehetra ireo izay, toy ny Sea Glass, dia potehin'ny ranomasina, amoron'ny farihy na renirano, na dia ny fahita any amoron-dranomasina aza no fahita indrindra. Raha tsy fantatrao izay Jereo ny fitarihanay ny Sea Glass.
Ankoatra ny Sea Pottery dia antsoin'izy ireo koa hoe Stoneware Sea Pottery. Tsy mahalala anarana amin'ny teny Castilian aho, angamba ny fandikan-teny dia keramika an-dranomasina na seramika an-dranomasina, keramika an-dranomasina grés. Toa mitombina daholo ny mitambatra, saingy heveriko fa amin'ireto tranga ireto dia tsara kokoa ny manohy mampiasa ny anarana anglisy.
Lahatsary famelabelarana kely hampahafantatra antsika ny tontolon'ny jeolojia mahafinaritra. Mety ho an'ireo rehetra te-hanomboka ka hahita izay ataon'ity siansa ity.
Geolojista ao anaty fahantrana. Dia lavitra mandritra ny fotoana ary mankamin'ny faritra lalina indrindra amin'ny tany
Nahúm Méndez, mpanoratra geolojista ary mpanoratra ny bilaogin'i Geolojista ao anaty fahantrana. Efa ela no nanarahako azy tao amin'ny twitter-ny @geologo
Tena tiako ilay izy, fa tiako kosa ny hidirany bebe kokoa amin'ny jeolojia. Manantena aho fa hisy volavolan-tsokajy faharoa efa miditra amin'ny lohahevitry ny karazana formations, rock, mineraly, sns. Antontan-taratasy iray izay manampy ny naturalisista hivoaka any an-tsaha ary hahafantatra izay karazana formations hitany sy ny antony namoronan'izy ireo.
Toad mpampivelona mahazatra (Alytes bevohoka). Amphibian mahazatra any Espana miaraka amina quirks vitsivitsy.
Ity misy manana tantara kely. Hitanay izy io, rehefa nanadio ny pisinina. Taorian'ny ririnina rehetra nefa tsy nameno azy dia nivoaka avy tao amin'ny fantsom-pamenoana izy ary latsaka tao anaty rano. Ho fanampin'ny tadikely 6 misy habe iray. Namela ny sahona izahay ary nikarakara ny tadpoles, ny 3 tamin'izy ireo dia nahatratra olon-dehibe.
Nohararaotiko ity fisamborana ity mba hampianarana ny zanako vavy mamantatra karazan-javamaniry miaraka amina torolàlana lehibe sy dichotomous ho an'ny famantarana ny amphibians ao amin'ny valan-javaboary natiora Espana. Ny Ministeran'ny tetezamita ekolojia no namorona azy. Azonao sintonina avy amin'ny Ity rohy ity ary izaho koa manantona azy sao sanatria very sao mijanona tsy misy ireo zavatra ireo. Tian'izy ireo aho.
Centaura ambany, ny afon'ny tany
Ny centauryCentaurium erythraea) dia ahitra isan-taona na roa taona, mahazatra ny faritra Mediteraneanaa izay maniry amin'ny tany mahantra sy maina, eo akaikin'ny lalana sy amin'ny fanadiovana eo afovoan'ny ala, amin'ny fotoana marobe dia mamorona toy ny kijana mini centaury.
Zavamaniry mahazatra an'ny zavamaniry ao amin'ny fiarahamonina Valencien izay itoerako. Hitako izany isan-taona ary ny zanako vavy dia nianatra namantatra azy mora foana. Ity misy horonan-tsary momba ny zanako vavy 7 taona nampahafantatra azy.
Ahoana ny fomba hanavahana ny fihasamihafana sy ny sidina ary ny fiaramanidina
Mihetsiketsika, mitelina ary fiaramanidina Vorona 3 fahita any an-tanànantsika sy tanànantsika izy ireo ary na dia miara-mipetraka amin'izy ireo aza dia afangaroin'ny olona izy ireo ary tsy afaka mamantatra azy ireo.
Handao ny boky feno isika miaraka amin'ny tetika sy lafin-javatra rehetra tokony hijerena fankasitrahana tsara.
LMora kokoa ny mamantatra ny fiovanaEo anelanelan'ny fiaramanidina sy ny sidina dia tsy maintsy mijery kely kokoa isika fa ho hitanao ny fomba tena tsotra.
Ny sidina sy ny fiaramanidina dia Hurindinidae an'ny fianakaviana Hirundinidae raha ny hafainganam-pandeha kosa dia ny fianakaviana aphid Apodidae izay midika ara-bakiteny hoe tsy misy tongotra.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny tsirairay izahay dia manana ny fisie tsirairay. Isaky ny manana angona, sary ary te hahafanta-javatra bebe kokoa
Ho an'ireo izay tsy mahalala dia antsoinay hoe Ranomaso Ranomasina, ahidrano, fitaratra amoron-dranomasina, na ranomaso mermaid ho an'ny sombin-... Tohizo ny famakiana
Sary avy amin'ny https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sanchezn
Iray amin'ireo vorona an-tanàn-dehibe izay efa nahazatra antsika indrindra miaraka amin'ny fody na dia tsy azontsika fantarina aza. Ny Plane dia mponina amin'ny arabenay. Hitanay izy ireo manidina eo amin'izy ireo ary miorina amin'ny lavarangana sy zoro.
Miompy amin'ny zanatany amin'ny toeram-piompiana, tanàna ary tanàna izy ireo ary koa amin'ny tany malalaka na dia manintona trano aza.
Sarin'i Vincent van Zalinge
Heveriko ho toy ny iray amin'ireo vorona tsara tarehy indrindra ny sidina. Ny fahatongavany niaraka tamin'ny an'ny fiaramanidina ary ny mihetsiketsika maneho ny fahatongavan'ny lohataona izy ireo.
Izany dia Karazan-kazo tafiditra ao amin'ny lisitry ny karazan-javamaniry eo ambanin'ny fitondrana fiarovana manokana.
17 - 21 sm sy ny tanora 14 ka hatramin'ny 15
Hibernate any Afrika
Bibikely mihaza ambany noho ny tany
Afaka mahita azy isika manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra.
Ao amin'ny 2021, ny haingana dia vorona iray an'ny SEO BirdLife! Heveriko ireo mampihetsi-po ireo tena mpanjaka amin'ny rivotra. ... Tohizo ny famakiana